Dabalataanis galuumsawwan sarara fayyadamuun qindessuu ni dandeessa. sarartoo agarsiisuuf, Sarara - Mul'annoo fili.
Cancala Dhangii - Keewwata - Galuumsootaa fi Addaan Fageenya fili
Keewwata akkaataa hammamtaa bocquu fiaddaan fageenya sararaa ofumaan galchaa Qindaa'inni sanduuqa Sarara Jalqabaa keessaa ni gatame.
Sarara addaan fageenyaatti sirruumman walsimu kan saduuqa keessaa galchiitu qindeessa. Kun arfiilee soofame kan argamu.
Bu'uura ka'uumsa tokkoo sararaa barruu tarsaa galmee sarjaa akka tokkoon tokkoo sararaa hojjaa waliin walfakaatu hiriirsa. Amala kana fayyadamuuf jalqaba dirqama Dhugaa- galmeessuu dirqala haalata fuula ammee kakaasi. Kana galchuuf, Dhangii - fuulaa fili, caancala Fuula irratti cuqaasi, ittaansuudhaan dhuugaa-galmeessuu sanduuqa keessaa bal'ina Teessuma qindaa'inaa fili.